Xaliimo Yarey “Madaxda dowladda waa inay cadeeyaan nooca ay noqon doonto doorashada sanadka 2016-ka” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
11th August 2015 MAREEG Af Soomaali, Featured 0
Xukuumadda iyo Baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhamaadkii bishii hore ee July isku waafaqay inaanay dalka ka qabsoomi karin doorasho xalaal ah (Qof iyo codkii), isla-markaana ay ka shaqaynayan wixii xilliga kala guurka ee Xukuumadan looga gudbi lahaa, sanadka soo socda.
Xaliima Yarey ayaa sheegtay in hogaanka dalka laga rabo inay cadeeyaan wixii ay doorashada noqon laheyd.
“Madaxda Dowladda, Xukuumadda iyo Baarlamaankaba waxaa laga rabaa inay cadeeyaan nooca ay noqon doonto doorashada sanadka 2016-ka la qaban doono, haddii ay sheegeen inaysan dalka ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah”ayay tiri Xaliima Ibraahim Ismaaciil.
Sidoo kale waxaa ay sheegtay in 15-ka bishan ay tahay waqtiga ay doonayaan in lagu cadeeyo nooca lagu wado inay noqoto doorashada dhici doonta sanadka soo socda.
“15-ka bishan Agoosto waxaan ka rabnaa inay noo sheegaan qaabka ay u dhici doonto doorashada, dadka Somaliyeed oo dhan waxay suggayan noocii ay doorashadu noqon laheyd”ayay tiri Xaliima Yarey.
War murtiyeed dhowaan ka soo baxay Beesha Caalamka ayaa loogu baaqay dowladda Federaalka inay la timaado is bedel xaga siyaasada, isla markaana la qorsheeyo sanadka 2016 nooc doorasho ee dalka ka dhici doonta.